Liiska Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarashada Kanada ee loogu talagalay Ardayda Caalamiga ah 2022
Boostadani waxay siisaa liis faahfaahsan oo ah jaamacadaha bilaashka ah ee waxbarashada Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee doonaya inay ku sii wataan shahaadada machad Canadian ah oo aan qiimo lahayn.
Kanada waxaa caalami ahaan loo aqoonsan yahay inay tahay mid ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ugu sarreeya sidaas darteed dad badan oo ka kala socda dhammaan dacallada adduunka ayaa halkaa ku soo qulqulaya sannad kasta iyagoo raadinaya waxbarasho tayo leh iyo shahaadooyin. Wadanka - Kanada - wuxuu leeyahay qaar ka mid ah jaamacadaha adduunka ugu wanaagsan waxayna caan ku yihiin wax ku biirintooda qaar ka mid ah horumarada waaweyn ee adduunku maanta ku naaloonayo.
Jaamacadaha Kanada waxay bixiyaan waxbarasho tayo leh oo ku saabsan farshaxanka, sayniska jirka iyo sayniska, injineernimada, iyo barashada ganacsiga.
Tayadan ayaa sidoo kale sii socota si ay u gaarto darajooyinka ay bixiyaan machadyadan, waxay ka mid yihiin darajooyinka ugu sareeya ee adduunka laga aqoonsan yahay waxaana aqoonsan hay'ad iyo hay'ad kasta oo adduunka oo dhan ka jirta.
Hadday tahay bachelor, masters, postgraduate, ama barnaamijka dhakhaatiirta aad rabto inaad raacdo, jaamacadaha Kanada dhammaantood way bixiyaan. Ardayda adduunka oo idil ayaa sidoo kale lagu soo dhaweynayaa inay kaqaybqaataan oo ay kaqaybqaataan adeegyadeeda waxbarasho ee tayada leh.
Ku saabsan Jaamacadaha Bilaashka ah ee Kanada
1. Jaamacadda Saint Mary
2. Jaamacadda Concordia
3. Machadka Teknolojiyada Koonfurta Alberta
4. Jaamacadda Toronto
5. Jaamacadda Calgary
6. Jaamacadda Waterloo
7. Jaamacadda Carleton
8. Jaamacadda York
9. Jaamacadda British Columbia
Si runta loo sheego, ma jiraan jaamacado bilaash ah oo wax lagu barto Kanada, ama ardayda caalamiga ah ama kuwa gudaha ahba dhammaan jaamacadaha dalka ayaa laga bixiyaa. Laakiin, weli waad ku raaxeysan kartaa waxbarasho bilaash ah oo ka jirta jaamacadda aad jeceshahay ee Kanada adoo codsanaya deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo oo maalgelin doona waxbarashadaada sannadaha oo dhan.
Si kor loogu qaado dhiirigelinta ardayda, dowladda Kanada, ururada samafalka, shakhsiyaadka hodanka ah, iyo machadyada ku yaal Kanada ayaa isu yimaada sannad kasta si ay u siiyaan fursado deeq waxbarasho ardayda.
Deeqahaani waxay ku yimaadaan qaabab kala duwan, sida deeqaha waxbarasho, si buuxda loo maalgeliyo oo qayb ahaan loo maalgeliyo deeqaha waxbarasho, is weheshi, iyo noocyo kale oo gargaar lacageed ah.
Si kastaba ha noqotee, ma geli doonno noocyada kale ee deeqaha waxbarasho, iyo kaalmada maaliyadeed ee ka timaadda deeqaha waxbarasho ee si buuxda loo maalgeliyo.
Maqaalkani waxaa loogu talagalay inuu kaa caawiyo inaad wax ku barato Kanada bilaash ahaan arday caalami ah. Nasiib wanaagse, fursadaha deeqaha waxbarasho qaarkood ayaa loogu talagalay ujeedadan gaarka ah, halka qaar ka mid ah ay si toos ah u bixiyaan iskuulku, kuwa kalena waxaa bixiya hay'ad ka mid ah taas oo markaa ka dhigaysa mid laga heli karo dugsiga aad codsanayso.
Si kastaba ha noqotee, waxaan ku siin doonnaa liistada jaamacadaha bilaashka ah ee waxbarashada Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah. Ma aha "hay'adaha lacag la'aanta ah ee waxbarashada" halkii se, laakiin jaamacadaha bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda ardayda caalamiga ah.
Ardayda loo xushay dugsigan deeq-lacageedka buuxa ee iskuuladan Canadian-ka ah waxay si buuxda oo bilaash ah u leeyihiin iyadoon wax lacag ah laga qaadin.
Iyada oo deeq-lacageed oo dhammaystiran, uma baahnid inaad bixiso kharashka waxbarashada haddii aad la socoto shuruudaha deeq-lacageedka ee loo dejiyay si loo ilaaliyo deeqda waxbarasho illaa dhammaadka waxbarashadaada.
Marka, waad sii wadi kartaa inaad ku dhammaystirto shahaadadaada jaamacaddaas adigoon bixin khidmadaha waxbarashada. Marka jaamacadaha aan ku bixiyay halkan waa machadyo siiya deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo ardayda caalamiga ah.
Waa hagaag, waxaa laga yaabaa inaad bixiso kharashyada nolosha - taasi waa haddii deeqda waxbarasho xitaa aysan daboolin - iyo kharashyada kale laakiin khidmadda waxbarashadu waa kharashyada ugu waaweyn ee daboolaya deeqaha waxbarasho.
Anaga oo aan ku sii dheeraan, aan u gudubno mowduuca ugu muhiimsan.
Kuwa soo socdaa waa liistada jaamacadaha bilaashka ah ee waxbarashada Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ama waxaad u gudbin kartaa iyaga jaamacadaha Kanada oo bixiya deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo ardayda caalamiga ah. Jaamacadahan ayaa kala ah;
Jaamacadda Saint Mary waxaa lagu daraa liiska jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Kanada loogu talagalay ardayda caalamiga ah maadaama ay siiso taxane ah deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo ardayda caalamiga ah ee ujeedkoodu yahay inay ku sii wataan shahaadada koowaad ee jaamacadda.
Machadkan sare ee waxbarashadu wuxuu sanad walba siiyaa ilaa sideed deeqo waxbarasho oo kala duwan ardayda caalamiga ah ee doonaya inay ku sii wataan barnaamijka shahaadada koowaad ee Saint Mary's.
Dhammaan deeqaha waxbarasho waa la cusbooneysiin karaa, markaa waad ku jiri kartaa iyaga illaa dhammaadka barnaamijkaaga illaa intaad sii waddo shuruudaha cusboonaysiinta.
Deeqaha sidoo kale waxaa heli kara oo kaliya kuwa cusub (ardayda sanadka koowaad) kuwaas oo muujiya waxqabad tacliimeed heer sare ah iyo kuwa muujiya baahi dhaqaale oo la xaqiijin karo.
Jaamacadda Concordia wuxuu ku biirayaa liiska jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah iyada oo la siinayo abaalmarin duulimaad oo dhameystiran oo dhowaan loo yaqaan 'Scholarship Scholarship'.
Sida aad qiyaasi lahaydba, abaalmarinta ayaa si buuxda loo maalgeliyey oo dib loo cusbooneysiin karaa illaa afar sano iyadoo loo maleynayo in guuleystaha uu ilaalinayo shuruudaha cusboonaysiinta.
Deeqda waxbarasho ee loo yaqaan 'Concordia Scholarship Scholarship' waxaa kaliya loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee doonaya inay ku sii wataan shahaadada mid ka mid ah barnaamijyada jaamacadeed.
Ardayda muujiya heer sare ee tacliimeed, xirfadaha hogaamineed, iyo dhiirigelinta in bulshada caalamku ka sii fiicnaato ayaa aad ugu habboon ku guuleysiga deeqdan waxbarasho.
Abaalmarinta waxaa la siiyaa sanadle ah waana mid aad u tartan badan, marka laga reebo waxbarashada waxay sidoo kale daboolaysaa buugaag iyo kharashyada nolosha.
The Machadka Teknolojiyada Koonfurta Alberta waa mid ka mid ah hay'adaha badan ee Kanada ka dhigi kara liiska jaamacadaha bilaashka ah ee waxbarashada Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah.
Hay'addan sare ee waxbarashadu waxay u qoondeysaa $ 5 milyan sanadkiiba deeqda waxbarasho ee ardayda caalamiga ah dhammaan barnaamijyada waxbarasho.
Abaalmarinta waxaa loogu talagalay ardayda imanaya ee muujiya heer sare ee tacliimeed, baahida dhaqaale, kaqeybgalka bulshadooda kala duwan, iyo meelaha kale ee guusha iyo taageerada.
Deeqda ayaa sidoo kale la cusbooneysiin karaa illaa afar sano illaa iyo inta guuleystayaasha ay ilaalinayaan shuruudaha cusbooneysiinta, sidaas darteed waxaad ku baran kartaa barnaamij aad dooratay oo bilaash ah oo lacag la'aan ah xarun sare sida Machadka Teknolojiyada Koonfurta Alberta.
Waxaa jira fursado maalgelin oo isdaba-joog ah oo laga heli karo goobta Jaamacadda Toronto kuwaas oo qayb ahaan la maalgeliyo, oo si buuxda loo maalgeliyo, sidoo kalena loo heli karo dhammaan noocyada ardayda dhammaan barnaamijyada shahaadooyinka iyo heerarka waxbarasho.
Si kastaba ha noqotee, machadkan sharafta leh wuxuu ka dhigi karaa liiska jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah sababta oo ah barnaamijka 'Lester B. Pearson International Scholarship Program' ee ay bixiyaan.
The Lester B. Pearson Barnaamijka Deeqda Caalamiga ah waxaa dhab ahaantii bixiya qaar ka mid ah hay'adaha ugu sarreeya Kanada, Jaamacadda Toronto waa mid ka mid ah.
Barnaamijka deeqda waxbarasho ayaa si buuxda loo maalgeliyaa si loo daboolo waxbarashada, buugaagta, khidmadaha lama filaanka ah, iyo taageerada deganaanshaha buuxa ee afar sano taas oo ka dhigaysa kuwa ku guuleysta abaalmarintan ardayda bilaashka ah ee Jaamacadda Toronto.
Deeqdan ayaa la siiyaa sanad walba ardayda imanaya ee doonaya inay ku sii wataan shahaadada koowaad ee Jaamacadda Toronto.
Abaalmarinta waxaa inta badan lagu bartilmaameedsadaa ardayda caalamiga ah ee mufakiriinta fekerka leh, waxay muujiyeen heer sare tacliimeed iyo karti hoggaamineed, waxayna ku faraxsan yihiin barashada iyo sahaminta caqliga.
Jaamacadda Calgary waxay ka dhigeysaa liistadan jaamacadaha bilaashka ah ee waxbarashada Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah maxaa yeelay waxay leedahay dowlad fara badan iyo deeqo waxbarasho oo shaqsi ahaan loo maalgeliyo ardayda dhigata shahaadada koowaad iyo kuwa qalin-jabinta ee lagu bixiyo dugsiga.
In kasta oo deeqaha waxbarasho labadaba si buuxda loo maalgeliyey oo qayb ahaan la maalgeliyey, halka qaarna ay yihiin is weheshi, deeq waxbarasho, iyo noocyo kale oo gargaar lacageed ah.
Laakiin maadaama aan ku siineyno deeqo waxbarasho oo ka dhigi doonta waxbarashadaada Kanada sidii arday qalin jabisay oo caalami ah oo bilaash ah, ka dibna Deeqaha Waxbarashada ee Vanier Canada (Vanier CGS) ayaa ah ikhtiyaarka kuugu fiican adiga.
Deeqda waxbarasho ee VCGS waxaa loogu talagalay kaliya ardayda qalin jabisa waana la cusbooneysiin karaa illaa saddex sano oo ah daraasadaha qalin-jabinta. Deeqdani waa mid ay dowladdu maalgeliso waxaana lagu bixiyaa jaamacado kala duwan oo ku yaal Kanada, Jaamacadda Calgary sidoo kale waxay ka mid tahay iyaga.
Nasiib wanaagse, waxaan dhawaan diyaarinay maqaal ku saabsan Vanier Canada Graduate Scholarships oo aad ka heli karto waxtar maadaama ay ku jiraan dhammaan faahfaahinta sida shuruudaha dalabka iyo waqtiga kama dambaysta ah, nidaamka dalabka, u-qalmitaanka, iyo jaamacadaha bixiya deeqda waxbarasho.
Marka laga tago, ardayda caalamiga ah ee shahaadada koowaad ka baxday looma daayo maadaama ay iyaguna sii wadi karaan barnaamij kasta oo shahaadada koowaad ee bachelor-ka ah ee ay doortaan waxbarashadooda bilaashka ah iyada oo loo marayo Jaamacadda Calgary International Entrance Scholarship.
Abaalmarinta waa la cusbooneysiin karaa illaa afar sano illaa iyo inta guuleystuhu haysto shuruudaha cusboonaysiinta.
Ma la yaabban tahay sababta ay hay'adani ugu sameysay liiska jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Kanada ardayda caalamiga ah? Waa tan sababta?
Labada ugu sareeya ee deeqaha waxbarasho ee buuxa ee ardayda caalamiga ah ee Kanada waxaa lagu bixiyaa Jaamacadda Waterloo. Iyagu waa Pierre Elliot Trudeau Deeqaha Aasaasiga ah iyo Vanier Canada Graduate Scholarship, oo ay heli karaan masters-ka iyo ardayda qalin-jabisa illaa dhammaadka waxbarashadooda Waterloo.
Nasiib wanaagse, waxaan haynaa qodob si faahfaahsan uga hadlaya labada Pierre Elliot Trudeau Deeqaha Aasaasiga ah iyo Deeqda Waxbarashada ee Vanier Canada kaas oo ka kooban dhammaan macluumaadka waxtarka leh oo ay ku jiraan nidaamka dalabka, shuruudaha, iyo waqtiga kama dambaysta ah.
Waa kuwan jaamacad kale oo sare oo Canadian ah oo ku taal liiska jaamacadaha bilaashka ah ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah, halkaas oo aad ku sii wadi kartid barnaamijka shahaadada koowaad ee shahaadada koowaad ee kharashka eber. Tan waxaa lagu suurta galiyay iyada oo loo marayo Jaamacadda Carleton abaalmarinta gelitaanka ee ardayda caalamiga ah waana kaliya ardayda galaya machadka markii ugu horreysay.
Deeqda waxbarasho waa la cusbooneysiin doonaa saddex sano oo dheeri ah haddii aad buuxiso shuruudaha cusboonaysiinta.
Jaamacadda York waa hoyga ugu sarreeya Kanada ee barashada waxayna siisaa fursado waxbarasho oo taxane ah oo ardayda caalamiga ah ay dalban karaan. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira seddex ka mid ah deeqdan waxbarasho oo gabi ahaanba si buuxda loo maalgeliyo taas oo u oggolaaneysa ardayda caalamiga ah inay wax ku bartaan waxbarashada bilaashka ah Jaamacadda York.
Deeqdani waa deeqda waxbarasho ee otomaatiga ah ee Jaamacadda York, deeqda waxbarasho ee gelitaanka caalamiga ah ee kala-duwanaanta, iyo Hogaamiyaha Caalamiga ah ee Abaalmarinta Berrito ee Ardayda Caalamiga ah.
Deeqdan waxbarasho waxaa loogu talagalay oo keliya ardayda caalamiga ah ee doonaya inay ku sii wataan barnaamijka shahaadada koowaad ee jaamacadda York. Deeqdan waxbarasho ayaa dib loo cusbooneysiin karaa seddex sano oo dheeri ah ardayda ku guuleysata, waana taas sababta Jaamacadda York ay ugu jirto liiska jaamacadaha lacag la'aanta ah ee Kanada ardayda caalamiga ah.
Haddii ka dib markii aad ku guuleysatay abaalmarinta oo aad sii wadi karto joogitaanka tacliimeed sannad kasta, waxaad baran lahayd oo dhammaystiri lahayd shahaadadaada bachelor-ka ee Jaamacadda York iyada oo aanad bixin khidmadda waxbarashada.
The Jaamacadda British Columbia waa mid ka mid ah hay'adaha ugu sareeya ee wax ka barta Kanada waxayna bixisaa seddex baahi weyn oo qiimo leh iyo barnaamij ku saleysan deeq waxbarasho oo laga heli karo Barnaamijka UBC ee International Scholars Program.
Abaalmarintani si buuxda ayaa loo maalgeliyaa oo haddii aad ilaaliso shuruudaha cusbooneysiinta ka dib markii laguu doortay deeqda waxbarasho, waa la cusbooneysiin karaa saddex sano oo dheeri ah.
Waxaad arki doontaa naftaada oo daba socota oo kaheleysa barnaamijka shahaadada bachelorka ee aad doorbidayso xarun sare oo aan lagaa walwalin khidmadaha waxbarashada.
Tani waxay soo afjaraysa liiska jaamacadaha bilaashka ah ee waxbarashada ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ama sida aad u timid inaad u aragto, liiska jaamacadaha Kanada oo bixiya deeqo waxbarasho oo buuxda oo Kanada ah. Jaamacado badan oo ku yaal Kanada ayaa sidoo kale bixiya deeqo waxbarasho, laakiin kuwa halkan ku yaal waa kuwo la xushay maxaa yeelay waxay bixiyaan deeqo waxbarasho oo si buuxda loo maalgeliyo waxayna u adeegaan sidii aad u aadi laheyd jaamacad Kanadiyaanka ah oo lacag la'aan ah.
Waxaa laga yaabaa inaad ogaatay inay jiraan inbadan oo ka mid ah deeqdan waxbarasho ee loogu talagalay ardayda ka qalin-jabisa jaamacadaha marka loo eego ardayda qalin-jabisay. Tani waa sababta oo ah badankood waxaa loogu talagalay muwaadiniinta Kanada iyo deganaanshaha joogtada ah ee Kanada. Waxa kale oo jira deeqo kale oo deeqo ah oo ay maalgeliyaan shaqsiyaad gaar ah iyo ururo kuwaas oo markaa loogu talagalay ardayda iyada oo loo marayo jaamacadaha qaarkood.
Qaar ka mid ah waa Vanier CGS, Pierre Elliot Trudeau Deeqaha Aasaasiga, iyo kuwa kale oo aan halkan ku qorneyn.
Si kastaba ha noqotee, waxaan haynaa maqaallo kala duwan oo ku saabsan dhammaan noocyada deeqaha waxbarasho ee aad dalban karto sidii arday caalami ah oo galaya mid ka mid ah bachelor, masters, postgraduate iyo barnaamijyada takhasuska waxbarasho.
Xiriirinta faahfaahinta fursadahaan waxbarasho waxaan kula wadaagay talooyinka hoose. Sidoo kale, ogow in shuruudaha deeqda waxbarasho ee loogu talagalay liiska jaamacadaha bilaashka ah ee waxbarashada ee Kanada ee loogu talagalay ardayda caalamiga ah ee ku qoran boostadan ay ku kala duwan yihiin barnaamijka daraasadda, iyo xaaladaha qaarkood, waddanka aad ka timaaddo.
Markaa, ka hor intaadan bilaabin mid ka mid ah arjiga deeqaha waxbarasho si taxadar leh u akhri shuruudaha oo hubi inaad la kulanto si aad ugu qalanto maadaama ay yihiin kuwo aad u tartamaya. Fiiri talooyinka hoose si aad u hesho deeqo waxbarasho oo badan sida arday caalami ah oo raba inuu wax ku barto Kanada asidoo kale, tixgeli bookmarking adeeg qoraal jabane.com si aad u hesho ilo tacliimeed oo xirfad leh laba jeer oo gujis ah browserkaaga.
Ka hel MBA gudaha Jarmalka Adoon lahayn GMAT ama Khibrad Shaqo
Sida looga helo MBA gudaha Singapore
Barashada Hagaha Dibadda Isku xirka Sp Dibedda Ku Baro Iyada oo Deeq waxbarasho la siinayo
Previous Post:250+ Hard Bible Su’aal iyo Jawaabahooda
Post Next:10 Koorsooyinka Khadka Tooska ah ee Maareynta Mashruuca Iyadoo Codsi Bilaash ah
Daniel Uzowuru wuxuu leeyahay,
April 6, 2022 at 9: am 48
Waxaan rabaa inaan wax ku barto Kanada, oo aan buuxiyo dhammaan shuruudaha layga rabo.
Waxaan u baahanahay hage si aan tan u fuliyo.
Waxa la igala soo xidhiidhi karaa Iimaylka aqoonsiga hoose ama +234 7063824104
Mahadsanid Ma/Sir .
Olena Sukhost wuxuu leeyahay,
April 26, 2022 at 6: 12 pm
Hello. Magacaygu waa Elena, aniga iyo qoyskayga waxaan nahay qaxooti ka yimid Ukraine. Waxa aanu qorshaynay in aanu nimid Kanada badhtamaha May. Waxaan rabnaa in aan wax ka barano machadka oo aan helnay macluumaadkaas oo kale in ay suurtagal tahay in la helo waxbarasho lacag la'aan ah Yukreeniyaan. Waxaan rabay inaan ogaado sida aan wax u baran karno, waa maxay shuruudaha anaga? Ma jiraan koorsooyin Ingiriisi oo bilaash ah oo lagu galo machadka?
Chinenye ukaegbu wuxuu leeyahay,
February 21, 2022 at 12: 16 pm
Hi, chinenye ukaegbu oo u dhashay Nigeria, wuxuu jeclaan lahaa inuu wax ku barto jaamacaddaada.
Waxaan jeclaan lahaa inaad si naxariis leh ugu soo dirto kharashka waxbarashada boostadayda.
Mahadsanid ilaah ha barakeeyo.
namal wuxuu leeyahay,
February 17, 2022 at 9: am 14
waa maxay sponsor post of this site=https://studyabroadnations.com/
Maxamed Shameel wuxuu leeyahay,
December 27, 2021 at 7: am 43
Waxaan qabaa in ardaydu ay bartaan koorsooyinka khadka tooska ah ee suuqgeynta dhijitaalka ah iyo xirfadaha kale si ay si fudud ugu maareeyaan kharashaadka halkaas iyagoo siinaya adeegyo khadka ah. Suuqgeynta Dijital ah waa qalab horumariyay habka suuqgeyntu u shaqeyso. Waxay abuurtay muuqaal cusub oo ku saabsan habaynta iyo shakhsiyaynta ee xeeladaha iyo hawlaha suuq-geynta. Si loo helo dakhli korodhay 95% shirkaduhu waxay shaqaaleysiinayaan suuqgeynayaal xirfad leh si ay u qaataan xeeladaha suuqgeynta dhijitaalka ah oo ay uga soocaan shirkadooda marka loo eego dadka badan. Tan iyo markii suuqgeynta dhijitaalka ah la soo bandhigay 1990-meeyadii, adeegsiga agabka iyo warbaahinta ee bixinta alaabada iyo adeegyada ayaa si isdaba joog ah u kordhayay 31kii sano ee la soo dhaafay. Tani waxay horseedaysaa kordhinta baahida loo qabo suuqgeynayaasha dhijitaalka ah ee xirfadleyda ah. Suuqgeynta dhijitaalka ah ayaa lama huraan u noqotay ganacsi kasta si uu ula tartamo qofka ka soo horjeeda iyo sida suuqgeynta dhijitaalka ah uu uga caawiyo ganacsiga inuu kobo. Haddii aad rabto inaad iska indho tirto ereygan, qofka kaa soo horjeeda waa inuu ka faa'iidaysto oo ka saaraa shirkaddaada warshadaha.
Pingback: Jaamacadaha Bilaashka ah ee Waxbarshada ugu Fiican ee Mareykanka iyo Sida loo dalbado 2021 kasta
ndukwe Nelson wuxuu leeyahay,
November 6, 2021 at 10: am 44
ma ka codsan karaa nigeria..
DIALLO ABDOULAYE wuxuu leeyahay,
October 6, 2021 at 1: 20 pm
Aad baan ugu faraxsanahay in aad la kulanto dad aad u tiro badan
Henok Alambo wuxuu leeyahay,
September 10, 2021 at 2: 21 pm
Waxaan rabaa inaan ku bilaabo sayidyada koorsada Maaraynta iyo hoggaaminta
Deon wuxuu leeyahay,
June 15, 2021 at 1: 24 pm
aad baad ugu mahadsantahay dhigida maqaalkan, waxay ahayd caawinaad weyn.
June 8, 2021 at 5: 43 pm
Aad baad u mahadsantahay ilaahayna ha barakeeyo.
Machuki wuxuu leeyahay,
June 3, 2021 at 4: 10 pm
Waan jeclahay tan. Ilaah ha barakeeyo
June 2, 2021 at 2: 43 pm
Aad ayaad u mahadsantahay ilaahay haku barakeeyo si hodan ah. Waxaan rajeynayaa in caruurtaydu heli doonaan mid sidoo kale
Rebecca wuxuu leeyahay,
May 17, 2021 at 7: 11 pm
Waa dad wanaagsan oo leh qalbi ay ku caawiyaan biniaadamka… waxaan rajaynayaa in tani sifiican ay aniga ila noqon doonto oo noloshayda waligey bedesho, aad baad u mahadsantahay!
Aniorji Fadlan wuxuu leeyahay,
March 3, 2021 at 1: am 19